Akụkọ - Na-eme Nnukwu Oplọ Ahịa Manx Guangzhou
Na July 1, ọhụụ nke ụlọ ọrụ ịkwa akwa na-elekwasịkwa anya ọzọ na Guangzhou, obodo a ma ama na China. N'ụbọchị ahụ, ọ bụ nnukwu ụbọchị maka ụlọ ọrụ ahụ. Nanị ụlọ ahịa nke Guangzhou Xiaoping igwe eji akwa akwa na "Xiaoping agịga ụgbọ ala obodo" meghere n'otu ụbọchị, ha abụọ nwere obi ụtọ ma na-eme ememe.
Maazị Mao Xiaoyong, onye isi oche nke Zhejiang manks igwe akwa igwe Co., Ltd., dịka naanị onye nnọchi anya akpọrọ nke onye nrụpụta ahụ, bịara ebe ahụ iji bepụ rịbọn ahụ iji mee mmemme mmeghe nke "manks nanị ụlọ ahịa" na "agịga Xiaoping ụgbọ ala obodo ”. Ndi ozo no na emume a bu Liang Fuxiang, onye isi oche nke ulo oru ndi ahia nke Guangdong, Shao Lishi, onye osote onye isi oche na ode akwukwo ukwu, Mao Shitang, osote onye isi oche nke Shenzhen Garment Machinery Association; Wang Hongchen, onye isi njikwa ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Hongxin; na onye ofufe Sijie, onye isi njikwa nke Xiaoping igwe akwa akwa obodo.
N'ụbọchị mmeghe, naanị ụlọ ahịa naanị nke Manx igwe eji akwa akwa jupụtara n'ọ joyụ na obi ụtọ, ndị manks gosipụtara ngwaahịa ngwaahịa "Lingzhi" kachasị ọhụrụ e mepụtara na 2014. N'otu oge ahụ, ọrụ nkwalite ndị a ma ama dịka "ịzụta igwe igwe akwa max. maka iPhone 5S n'efu na "1 yuan maka igwe" ka enyere. Na emume a, akpọrọ ndị na-ese ihe eji ama obodo ka ha tee ihe na saịtị ahụ iji gosipụta ọmarịcha ihe osise "agba ahụ" oge anwụ a, na-etinye nka na omenaala n'ime nkwalite akara Manx.
E nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ndị isi maka igwe igwe akwa na ụlọ na mba ofesi. Oghere nke ụlọ ahịa naanị nke Guangzhou Xiaoping igwe ejiji akwa na-egosiputa ọganihu na-aga n'ihu n'ahịrị nke ijikọta ọnụ na ọwa. Thelọ ahịa ọnụ ahịa ahụ abụghị naanị na okike na nkwalite, kamakwa ọ dị mma maka ndị ahịa ịnwale igwe na ịlele nlele na saịtị ma nye nkwado ọrụ ahịa mgbe a gachara. Anyị kwesịrị inye egwuregwu zuru oke na ọrụ radiesị ya na mmetụta ya, nke bara uru maka ụlọ ọrụ nkesa na ndị na-ere ahịa iji guzobe ma gbasaa ahịa gbara ya gburugburu.